Ukuphupha ngeScheck Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga neScheck. Ukutolikwa kwephupha yinto enzima, kuba akukho buchule bokuyiqinisekisa. Kodwa unokufumana ngakumbi malunga nokutolikwa kwamaphupha kwesi sikhokelo.
Itsheki sele ithandwa kakhulu ixesha elide. Yayiyindlela eyaziwayo yokuhlawula, ngakumbi xa useluhambeni, kuba wawunganyanzelekanga ukuba uphathe imali eninzi. Nangona kunjalo, ngokuziswa kwekhadi le-EC, ukubaluleka kwetsheki kwathatha isitulo sangasemva, njengoko yayiyeyona ndlela ilula yokuhlawula.
Ke inokuthetha ntoni ukuba itsheki ivela ephupheni? Inokumela ntoni kwaye ifuna ukwalatha ntoni? Ngaba mhlawumbi yimemori evela kumava angaphambili okanye ngaba kukho okungaphezulu kolu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «ukuqinisekiswa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuqinisekiswa» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha «ukuqinisekiswa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, uphawu lwephupha "ukuqinisekiswa" kuchaza isithembiso. Kubaluleke kakhulu ukuba sigcinwe esi sithembiso. Kwiimeko ezinqabileyo, itsheki njengophawu lwephupha inokuba sisilumkiso sezithembiso ezingenanto. Ukuba kunjalo, umphuphi kufuneka alumke ebomini kwaye athembe iimvakalelo zakhe.
Ukuba umphuphi ubona itsheki ephupheni, kufuneka alinde ebomini bokuvuka ukuba isithembiso esamkelweyo sizalisekisiwe. Ukongeza, le meko yamaphupha inokubonisa ukuba umntu ophuphayo angawahlawula amatyala akhe kwaye angafumana nelifa lemali. Ukufumana itsheki ephupheni kuhlala kukwabhekisa kwisithembiso osinikiweyo kwaye ulumkise kwangaxeshanye ukusilela kwishishini. Umphuphi kufuneka abe nobulumko ekuvuseni ubomi xa esenza isivumelwano kwaye angangxami. Ukuba iphupha lenza isheke ephupheni lakho, uyaboniswa ukuba akufuneki uthembise nantoni na ongenakho okanye ongafuniyo ukuyizisa. Ukuchitha itsheki njengophawu lwephupha kuzisa iingxaki kunye nelahleko ebomini. Ukuba unika itsheki engeyiyo kumhlobo wakho ephupheni, uya kubhenela ekuthandeni nasekukhohliseni el mundo Ngokwenyani ukunyanzelisa izicwangciso zakho kunye neeprojekthi.
Uphawu lwephupha «ukuqinisekiswa» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, uphawu lwephupha «jonga» kufuneka luvavanywe ngokufanayo kwimali kwaye ke limele ngokubanzi Amandla. Nangona kunjalo, nakweli nqanaba lokuchazwa kwephupha, ukujonga iphupha kujongwa kancinci njengendlela yokuhlawula, kodwa njengomboniso wesithembiso. Ukuba uphupha ubhala itsheki ephupheni lakho, kuya kufuneka uqaphele ukuba uzibophelele kwinto ethile ebomini bakho. Oku uxanduva Kuya kufuneka uphinde ulandele ukhokelo lwabo kwaye ngenxa yoko ungayithathi kancinci. Ukuba ubona iitsheki ezininzi ephupheni, ngokokuchazwa kwengqondo ephupheni ebomini bakho kuthetha umthwalo omninzi. Oku kwenza ukuba kube nzima kuwe ukuba ugcine zonke izithembiso zakho. Ke ngoko, kuya kufuneka ume kancinci kwaye uthi "hayi" kwinto ethile.